नबिल बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ६ असोज २०७६)
बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदरमा आव २०८२ सम्मका लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको छ । बैंकले २० लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा साउन २८ गते नै निवेदन दिएको छ । बैंकले सर्वसाधराणलाई ८ लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । तर, बोर्डले हालसम्म पनि ऋणपत्रलाई अनुमति भने दिएको छैन । बैंकले गत आवमा रू. ४ अर्ब २९ करोड ४१ लाख ८१ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
अघिल्लो आवमा रू. ३ अर्ब ९८ करोड १८ लाख ९३ हजार नाफा गरेको थियो । बैंकले रू. ३ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ३९ हजार बराबरको रकम शेयरधनी लाभांशमार्फत वितरण गर्न सक्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी रू. ९ अर्ब १ करोड छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४७ दशमलव ६५ रहेको छ । आइतवारको कारोबारमा बैंकको अन्तिम शेयरमूल्य ५ अंक घटेर रू. ७६५ कायम भएको छ ।
2019-09-23 - 242 view(s) - abhiyandaily